२४ नेपाली चार महिनादेखि भारतको जेलमा जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
२४ नेपाली चार महिनादेखि भारतको जेलमा
काठमाडौ । भारतको हरियाणास्थित सतलोक आश्रमबाट पक्राउ परेका २४ नेपाली चार महिनादेखि जेलमा छन् । हिसार जेलमा रहेका उनीहरुमध्ये आठ जनालाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाउन लागिएको छ ।
सतसंगमा सहभागी हुन हरियाणा प्रान्तको हिसार जिल्लास्थित बारबलामा रहेको रापालजी आश्रममा गएका २४ नेपाली २ मंसिरमा पक्राउ परेका हुन् । उनीहरु मध्ये १६ जनालाई पक्रिया पुर्याएर रिहा गर्ने भनिए पनि अदालतले अझै केही नप्रष्ट्याएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अदालतमा उपस्थित नभएर मानहानी गरेको अभियोगमा रामपालजी समातिएका थिए । उनलाई गिरफ्तार हुन नदिन प्रहरीविरुद्ध बल प्रयोग गरेको लगायतका अभियोग नेपालीमाथि लगाइएको छ । उनीहरुको कानूनी मामिला हेरिरहेका वकिल एपी सिंहले आठ नेपाली तत्काल रिहा हुन नसक्ने र बाँकीलाई अदालतले केही प्रक्रिया नभनेको बताएका छन् ।
पक्राउ परेका नेपालीमा लक्ष्मण बस्नेत, विजय साह, योगेन्द्र चन्द, विनोद यादव, भूप सिंह, ईश्वर श्रेष्ठ, राजकुमार गिरी, सुरेश राई तत्काल रिहा हुन नसक्ने सिंहले बताएका छन् । उनीहरुमध्ये महतो र गिरी भारतीय प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका छन् ।
आईपीएलमा चेन्नई सुपरकिंग्स राजस्थान रोयल्ससँग मात्र १६ रनले पराजित
प्रसुती गृहमा मृत घोषणा गरी फ्याँकिएका शिशु ८ घण्टापछि रुन थालेसँगै टेपेर ल्याइयो
पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले पत्रकारको पेसालाई मजाक बनाए !
घुस लिएको अभियोगमा अदालतद्धारा कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई १८ वर्ष जेल सजायको आदेश
देशभरका कृषकहरुका लागि मन्त्री भुषालले दिए यस्तो खुःशीको खबर
सप्तरीमा कोरोना सङ्क्रमित पुरुषको घरमै मृत्यु
नेपाल टेलिकमको तार नै चोरी भएपछि…
सिन्धुपाल्चोकमा विश्वको ध्यान : जीवित महाकाली उत्पती, २१ जनामा सवार [ भिडियोसहित ]
काठमाडौं मुलपानीमा यस्तो कुरा लुकाउने दुईजनालाई प्रहरीले समात्यो
अनसनरत डा.केसीको उपचारका लागि सरकारले आठ सदस्यीय चिकित्सक टोली गठन गर्यो
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस्तो आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक
अमेरिकाद्वारा इरानी अधिकारीहरु र संस्था विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरु घोषणा
दिल्लीमा जस्तै काठमाडौमा कोठी [ अण्डरग्राउण्ड रिपोर्ट ]
मालपोतमा नयाँ सिस्टम लागू, एक क्लिकमा सबै थाहाँ पाउँनुहोस्
अनलाइन कक्षा सम्भव नभएपछि टोल टोलमा पढाउँदै शिक्षक